Phyu Phyu Thin Sympathizer: 10/01/2009 - 11/01/2009
Defeating HIV/AIDS, Preserving the Future
2 comments at 11:14 PM Labels: phyu phyu thin's writing
Opinion and comments in http://www.irrawaddy.org/opinion_story.php?art_id=17021
By PHYU PHYU THIN
When the immune deficiency syndrome disease (HIV/AIDS) first appeared in Burma in 1988, it was said that the first case was that ofasailor who was infected with the disease.
Possibly for that reason, after 1990 the syndrome was commonly known as "sailors' disease." Then the disease spread among the homosexual community in 1994-95, and it was called the "gays' disease."
I learnedalittle about the disease in school, but personally, I wasn’t very interested in the issue.
When I joined the National League for Democracy (NLD) in 1996, I became involved in various social issues, but HIV / AIDs still wasn’t high on my list.
By that time, it was well-known as the "4-alphabet disease" among Burmese youth, or "Lay lone disease” in Burmese. Many people were afraid when the government launched its first awareness campaign with billboards saying, "AIDS has no cure and there is no medicine for it."
Apart from awareness campaigns, the government had no program to give blood tests to people in vulnerable communities such as drug users or sex workers, and it neglected the spread of the disease.
As the situation worsened, many people died from HIV/AIDS. In my small community, adults and youths died from the disease, their bodies shrinking into the form ofaskeleton. If someone asked, their relatives might say that they died from tuberculosis (TB) or cerebral malaria.
When she was free forabrief period, Aung San Suu Kyi,aleader of vision, said duringaspeech in 1998 at the 13th International AIDS conference in Durban that openness will help control the spread of HIV, since people can discuss how it is contracted, how to control its spread and how to help those who already have the virus.
She said "containing the spread of HIV/AIDS is preserving our future," and, "If we could develop more compassion in this world then we would all have achievedahappier, more peaceful world."
Suu Kyi selected 19 NLD youth members to be trained in HIV prevention and care at the United Nations Development Program office in Rangoon. After the training, all 19 members started working inaNLD prevention and care program for HIV/AIDS patients. Since then, without financial assistance or salaries, we have worked to deliver care and raise HIV/AIDS awareness.
Meanwhile, the authorities are always looking at what we do, and they sometimes harass us because we are NLD members. It’s hard to keep the work going. The program continues withasmall group of workers, including me and Khin Htar Yee, who is liked my elder sister. With meager resources, we keep the program going amid many uncertainties and great anxiety.
I recall that our first HIV/AIDS patient wasapolice officer. Since then, we have cared for almost 2,000 infected patients. Many of our patients died while receiving our care. Many stories are tragic, but others are heart warming.
In our early days, we treated patients unsystematically, and we learned as we did our work. We went to patients' homes and offered help such as washing clothes, cleaningaroom or cooking. We were not familiar with HIV/AIDS medicines, and we had no source for knowledge or supplies. The patients were thankful for our support, but we couldn’t provide medical care, and they died.
At first, we faced tremendous hardships because of the stigma attached to HIV/AIDS. Most patients didn’t want others to know of their illness. In some cases, families welcomed us. But many families rejected us, not wanting to be associated with the disease.
At that time, most people believed HIV/ AIDS wasadisease of bad moral character or shameful behavior. The problem was compounded by the military government’s fear-driven campaign. Many patients would not go to hospitals or health services, and they wanted to keep their infection secret, which could sometimes lead to reckless lifestyles and more infections.
Many patients arrived too late to be treated at the Wai Bar Gi Infectious Disease Hospital. Those who could be treated often couldn't afford to buy drugs in the government’s ill-equipped hospitals.
Now many of our patients are given ARV (anti-retroviral drugs) medicine and support, and most can continue their lives.
However, while cheaper and affordable drugs are now available, some patients still go to faith healers or take herbal medicines or dangerous concoctions, seekingacure. Some even eat dog meat onceaday, believing it can cure them. We havealong way to go to remove misguided beliefs and deep-seated fears.
If Suu Kyi were free and able guide us, we could work to support our patients and treat the disease even more effectively.
I have committed my life to help people with the disease and to eliminate the spread of HIV/AIDS in Burma.
I urge people to join in the fight to prevent this catastrophic disease.
Phyu Phyu Thin,amember of the National League for Democracy, isakey organizer of the NLD’s HIV / AIDS outreach program
Kyaw Win Wrote:
Our Burmese leaders have no distinction between politics and social issues. Whatapity! People in Burma have been suffering from all kinds of physical and mental abuses and maltreatment under these leaders.
"Why no help?"
People like Turnell and BEW with these articles as proof have long shut down the help for health matters so tightly supported by groups of expats:
Just read the first few articles and you will know how the flippant attitude of these people convinced the world that it is useless and not worth the $ to deal with SPDC in health care matters or otherwise.
Consider that none of these "authors" has ever even been to the country.
Burma is the country that received the least help even without considering the lack of aid for Nargis after the initial SPDC blunder.
MSF is the only know organization that is indirectly involved inside Myanmar.
Until people stop politicizing health matters, the most vulnerable ones, the children and the poor, will bear the brunt.
It has come toapoint where the prevalence of children with TB, which used to be rare, is now the norm due to the degradation of education, nutrition, etc.
Jeffrey Hellman Wrote:
Why hasn't there been more financial support provided to Burma to help ameliorate the AIDS epidemic?
According to Doctors Without Borders, "An estimated 240,000 people are currently infected with HIV in Myanmar. 76,000 of these people are in urgent need of ART, yet less than 20% of them receive it through the combined efforts of MSF, other international non-governmental organizations (NGOs) and the Government of Myanmar.
For the remaining people, the private market offers little assistance as the most commonly used first-line treatment costs the equivalent ofamonth’s average wage.
The lack of accessible treatment resulted in 25,000 AIDS related deaths in 2007 andasimilar number of people are expected to suffer the same fate this year, unless HIV/AIDS services - most importantly the provision of ART - are urgently scaled-up."
0 comments at 2:44 AM Labels: phyu phyu thin's writing
ယနေ့ ဧရာဝတီတွင် ဖော်ပြထားသော ဆောင်းပါး
ကျမတို့ တိုင်းပြည်ကို HIV/Aids ရောဂါဆိုး တိတ်တဆိတ် ဝင်ရောက်လာတာဟာ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စတင် ဖြစ်ပွားစဉ်ကတော့ နိုင်ငံခြား သဘောင်္သား တယောက်က စဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၁၉၉ဝ နောက်ပိုင်းမှာ သဘောင်္သားရောဂါ ဆိုပြီး ခေါ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီက တဆင့် ၁၉၉၄-၉၅ လောက် ရောက်တော့ ဒီရောဂါဟာ လိင်တူ ဆက်ဆံသူတွေ အဖြစ်များလာပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ ဒီရောဂါကို အခြောက်ရောဂါ ဆိုပြီး ထပ်မံ ကင်ပွန်းတပ်ပါတယ်။
ကျောင်းမှာ ဒီရောဂါအကြောင်းသင်နေရပေမယ့် သင်တဲ့ဆရာကလည်း အလေးနက်မရှိ၊ အပွင့်လင်းဆုံး ပြောရ မယ်ဆိုရင် ကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်မဝင်စားခဲ့ပါဘူး။ ၁၉၉၆ ကျမကျောင်းပြီးလို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ်ကိုရောက်တော့လည်း တခြားသော လူမှုရေး လုပ်ငန်းတွေကိုသာ လုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ ဒီရောဂါနဲ့ ပတ်သက်လို့ သိပ်မသိခဲ့ပါဘူး။
မဖြူဖြူသင်း (ဓာတ်ပုံ - အေအက်ဖ်ပီ)
လူငယ်ထုကြားထဲမှာတော့ လေးလုံးရောဂါ၊ လေးလုံးရောဂါ ဆိုပြီးတော့ အတော်လေးတော့ အပြောများလာပါ တယ်။ အစိုးရကလည်း ကုရာနတ္ထိဆေးမရှိဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကြီးတွေကို လမ်းဆုံလမ်းခွတွေမှာ လိုက်တင်ပါတယ်။ ပြည်သူလူထုကလည်း အတော်လေး အထိတ်တလန့် ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။
အခြေအနေတွေကတော့ အတော်ဆိုးဝါးလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးသုံး လူငယ်များ၊ ပြည့်တန်ဆာများ အားလုံးကို သွေးစစ်ပေးမယ့် အစီအစဉ်မျိုးလည်း အစိုးရမှာ ရှိပုံမပေါ်ပါဘူး။ သူ့အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား ခိုင်မြဲရေး တခုသာ ကြည့်ပြီးတော့ ကျန်းမာရေးကိစ္စကို လှည့်တောင်မကြည့်သလို ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒီလို ဖြစ်သလိုသွားနေရင်းနဲ့ လူအတော်များများကလည်း သေကုန်ပါတယ်။ ကျမတို့ ပတ်ဝန်းကျင် အနီးနားက လူငယ်တွေ၊ လူလတ်တွေ ပိန်လှီပြီး သေကုန်တာမျိုးပါ။ မေးကြည့်လိုက်ရင် တီဘီကျွမ်းတယ်၊ ငှက်ဖျားပိုး ခေါင်း ထဲရောက်တယ် ပြောပါတယ်၊ ဒါကတော့ ကျမ ပတ်ဝန်းကျင် ကွက်ကွက်ကလေးက အခြေအနေပါ။ တတိုင်း ပြည်လုံးအခြေနေက ဘယ်လောက်ဆိုးဝါးနေပြီလဲ ဆိုတာတော့ သိပ်ပြောစရာ မလိုတော့ဘူး ထင်ပါတယ်။
ဒီလိုအခြေနေဆိုး ကြားထဲမှာပဲ ၂ဝဝ၂ ခု မေလခြောက်ရက်နေ့မှာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ခံထားရတဲ့ လူထု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပါတယ်။
စစ်အစိုးရကလည်း သမိုင်းစာမျက်နှာသစ် ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ စကားလုံးလှလှလေး သုံးပြီးကမ္ဘာကို ရုတ် တရက် ဖမ်းစားလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြည်သူလူထုရဲ့ အခြေခံပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး အစရှိ တာတွေကတော့ ဘယ်ခေတ်ကနဲ့မှ နှိုင်းမရအောင် ဆိုးဝါး ဆုတ်ယုတ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ တကယ့်အမြော်အမြင်ရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်ပါ။ “HIV ပိုးကို ထိန်းချုပ်ခြင်းသည် ကျမ တို့အနာဂတ်ကို ထိန်းသိမ်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်” လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၁၉၉၈ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ ဘန်ဒေါင်းမြို့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ခုခံအား ကျဆင်းမှုဆိုင်ရာ ညီလာခံကြီးအတွက် ပေးပို့တဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။
အာဏာပိုင်တွေက ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းတွေကို ဦးစားမပေးပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ တိုင်းပြည် အတွက် ဆောင်ရွက်ရမယ့် ကိစ္စရပ်တွေကို စတင် လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာမှ ကျမတို့ လူငယ် ၁၉ ဦး စိစစ် ရွေးချယ်ပြီး UNDP ရုံးမှာ HIV ကာကွယ်တားဆီးရေးနဲ့ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး သင်တန်း တက်ရောက်ဖို့ ပို့လွှတ် တာလည်း တခုပါဝင်ပါတယ်။
သင်တန်းကာလပြီးချိန်မှာတော့ ကျမတို့ လူငယ် ၁၉ ဦးစလုံး တက်ကြွစွာ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။ အဖွဲ့ချုပ် ရုံးမှာလုပ်တဲ့ ပညာပေး ဟောပြောပွဲတခု အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ရောဂါဝေဒနာ ခံစားနေရသူ တယောက်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ကျမ အတူတူ ဟောပြောကြပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး ဒီရောဂါဆိုးကြီး စွဲကပ်ခံနေရ သူတွေနဲ့ ကျမတို့ အဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေကြားမှာ လုံးထွေးပြီး လုပ်ကိုင်နေတာ ဒီနေ့ထက်တိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအလုပ်ကိုလုပ်လို့ တခြား NGO တွေလို ငွေကြေး မရပါဘူး။ ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်နေရ ပေမယ့် ရန်ပုံငွေလည်း ခုထက်ထိ မရှိပါဘူး။ အလျဉ်းသင့်သလို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတာပါ။ ဒီတော့ ကျမတို့ အဖွဲ့လုပ်ကိုင်နေတာကိုကြည့်ရင် စည်းစနစ်တကျမရှိ ဆိုသလိုဖြစ်နေမှာပါ။
တဘက်မှာ အာဏာပိုင်တွေကလည်း အစဉ်တစိုက် ဒုက္ခပေးဖို့ စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ ဒီအကြောင်းချက်တွေကို တော်ရုံ လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံက လူတွေ နားလည်မယ် မထင်ပါဘူး။ လူငယ်တွေဟာ ငွေကြေး တပြားတချပ်မှ မရ တာ ကြာလာတော့ သိပ်မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ၂ဝဝ၃ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းကျတော့ ကျမရယ်၊ အစ်မလို ခင်မင်ရတဲ့ မခင်ထားရီရယ် မိန်းမသား နှစ်ဦးတည်း လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရပါတော့တယ်။
ကျမတို့မှာ စတင် လုပ်ကိုင်စဉ်ကတည်းက ငွေကြေး ရန်ပုံငွေကလည်း မရှိ။ မိန်းမသားနှစ်ဦးတည်းလည်း ဖြစ်ပြန် ဆိုတော့ အစစ အရာရာဟာ စိတ်မချစရာနဲ့ စိုးရိမ် ပူပန်စရာ ဖြစ်နေတာပါ။ မှတ်မှတ်ရရ ကျမတို့ကို စတင် လာ ရောက် ဆက်သွယ်တဲ့ လူနာဟာ အာဏာပိုင်တွေဘက်က ရဲဝန်ထမ်းတဦး ဖြစ်နေတာပါ။ သူ့ကို စတင်ပြီး ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာ ခုဆို လူနာ ၂ဝဝဝ ကျော်သွားပါပြီ။
ကံမကောင်း အကြောင်းမလှလို့ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ လူနာတွေကလည်း အများကြီးပါပဲ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ လူနာတွေအကြောင်း ရေးသားပါဦးမယ်။
နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့ ကျမတို့ဆီရောက်ရှိလာတဲ့ လူအတော်များများကိုတော့ အေအာဗွီဆေး အကူအညီ၊ ကျမတို့ရဲ့ အားပေးမှုတို့နဲ့ အသက်ဆက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ခုချိန်မှာ ကျမကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်း ရှိသမျှ တိုက်ဖျက်နေပါတယ်။ အကယ်၍ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်လာပြီးတော့ လမ်းညွန်၊ ဦးဆောင်မှုပေးမယ်ဆိုရင် ဒီရောဂါဆိုးတိုက်ဖျက်ရေး ပိုမိုအားကောင်းလာမှာ မုချပါ။
ဒီရောဂါ အမြစ်ပြတ်ဆေး မပေါ်သေးသရွေ့ ကျမကတော့ HIV/Aids ကာကွယ်တားဆီးရေး၊ လူနာတွေကို ပြုစု စောင့်ရှောက်ရေးတွေ ဆောင်ရွက်ပေးနေမှာ ဖြစ်ပြီးတော့ ပြည်သူအားလုံးလည်း ကျန်းမာရေး သတိရှိရှိနဲ့ ဒီရောဂါ ဆိုးကြီး တိုက်ဖျက်ရေးမှာ အဖွဲ့တဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းလို့ဖြစ်စေ၊ တဦးချင်းဖြစ်စေ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါလို့ တိုက်တွန်း ချင်ပါတယ်။
အစောပိုင်းမှာ အထက်က တင်ပြခဲ့သလို ကျမတို့မှာ နည်းလမ်းလည်းမသိ ဆေးဝါးလည်းမသိ ယောင်ဝါးဝါး လျှောက်လှမ်းရတာပါ။ ဒီတော့ လူနာတွေအိမ်တွေကို လိုက်ပြီး ပြုစုကုသပေးတာ အဝတ်လျှော်၊ ကြမ်းတိုက်၊ ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ် ကျွေးမွေးတာတွေကို လိုက်လုပ်ပေးရုံက လွဲပြီး တခြားသော ဆေးဝါးကိစ္စတွေ မလုပ်ကိုင် နိုင်ဘူး ဖြစ်နေလေတော့ အစောပိုင်းလူနာတွေဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မြင့်တက်လာပေမယ့် ကိုယ်ခန္ဓာက မလိုက် နိုင်ဖြစ်ပြီး သေဆုံးကုန်ပါတယ်။
စလုပ်ကိုင်စဉ် အခက်အခဲ တခုကတော့ ကာယကံရှင်ကလက်ခံပါရဲ့ မိသားစုက လက်မခံဘဲ ကျမတို့ကို ဆဲဆို မောင်းထုတ်တာမျိုး လုပ်ပါတယ်။ တချို့ကျတော့လည်း မိသားစုကသိပြီး စိုးရိမ်၊ ကာယကံရှင်က လက်မခံတာ မျိုးတွေ အများကြီး ကြုံတွေ့ရပါတယ်။
ဒီရောဂါဟာ အကျင့်ပျက်လို့ဖြစ်တာ၊ စာရိတ္တချွတ်ယွင်းလို့ဖြစ်တာ ဆိုပြီး တလွဲအယူတွေ ရှိနေတာပါ။ အစိုးရက လည်း ကုရာနတ္ထိဆေးမရှိလို့ ပြောလိုပြော၊ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း ဒီရောဂါဖြစ်ရင် ခြောက်လပဲ ခံတော့မယ်၊ သေမယ်၊ ဆေးရုံတင်လို့လည်း မဖြစ်ဘူး၊ ဆေးရုံက ဆေးထိုးသတ်တယ် ဆိုတာလိုမျိုး သတင်းမှားတွေကလည်း အများကြီး ထွက်နေတာပါ။
ဒီလိုကောလာဟလတွေကြောင့် လူတွေ အတော်များများက သူတို့မှာ ဒီရောဂါလက္ခဏာရှိကြောင်း ပြနေစေဦး တော့ ဒီရောဂါဖြစ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး ဆိုပြီး ခါးခါးသီးသီး ငြင်းဆန်တော့ပါပဲ။ ဒီတော့ ဆင့်ပွားကူးစက်တာတွေ၊ အရက်သေစာ သောက်စားပြီး နေချင်သလို နေလိုက်တာမျိုးတွေ အများကြီး ဖြစ်ကုန်တာပါ။
ကနဦး အစတုန်းက ကုရာနတ္ထိဆေးမရှိလို့ အစိုးရက ပြောမယ်ဆိုလည်း ပြောစရာပါ၊ ကျမတို့နိုင်ငံမှာ အေအာဗီ ဆိုတာ ကြားတောင် မကြားဘူးသေးလို့ပါ။ ရောဂါသည် အများစုက ရောဂါအဆင့်လွန်ပြီးတော့မှ ဝေဘာဂီ ကူးစက် ဆေးရုံရောက်၊ ရောက်ပြန်တော့လည်း ပိုးသတ်ဆေးကအစ ဆေး နဲ့ ဆေးပစ္စည်းမျိုးစုံ ဝယ်ယူရလေ တော့ လူနာ အများစုက အသက် ဆုံးရှုံးရပါတယ်။
အခုကျတော့ အေအာဗီဆေးက အရင်ကထက်စာရင် အများကြီးသက်သာတဲ့ ဈေးတွေနဲ့ ဝယ်သောက်လို့ ရလာ ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ပျောက်စေဆရာတွေ၊ တိုင်းရင်းဆေးယောင်ယောင် ဘီးဇပ်ရွက်လို အရွက်တွေနဲ့ ဒီရောဂါပျောက် တယ်၊ ဒီရောဂါဟာ တနေ့ ခွေးတကောင်စားရင် ပျောက်တယ် ဆိုတဲ့ လွဲမှားတဲ့ အယူအဆတွေကိုတော့ တိုက် ဖျက်ရဦးမှာပါ။
မဖြူဖြူသင်းသည် ပြီးခဲ့သည့် ၁၀ နှစ် ဝန်းကျင်မှစတင်၍ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၏ HIV/Aids ဝေဒနာရှင်များ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး နှင့် ပညာပေးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ဦးဆောင် လုပ်ကိုင်နေသူ တဦး ဖြစ်သည်။